Bangladesh Avoid Series Whitewash
Friday, 19 August 2011 07:17
UCB Series, 4th ODI in Bulawayo: Bangladesh 203 for 4 (Tamim 61, Shakib 39*) beat Zimbabwe 199 (Taylor 106, Rubel 4-31) by six wickets.
Zimbabwe lost to a spirited Bangladeshi side by six wicket, thanks in a main to Rubel Hossain and some very attacking fielding from the visitors. Captain Brendan Taylor scored a well deserved century but this was not enough to change the outcome of the match.
Zimbabwe v Bangldesh Day 5
Monday, 08 August 2011 14:50
Castle Test, Day 5 in Harare: Zimbabwe 370 (Masakadza 104, Sibanda 78, Taylor 71) and 291 for 5 dec (Taylor 105*, Taibu 59) beat Bangladesh 287 (Nafees 50, Ashraful 73, Shakib 68, Vitori 4-66) and 244 by 130 runs All Zimbabweans rejoiced as the national cricket team celebrated their return to Test cricket after a gap of six years with a stirring victory over Bangladesh at Harare Sports Club by 130 runs.
Historic Test Victory For Zimbabwe
Monday, 08 August 2011 14:41
All Zimbabweans rejoiced as the national cricket team celebrated their return to Test cricket after a gap of six years with a stirring victory over Bangladesh at Harare Sports Club by 130 runs.
Zimbabwe v Bangldesh Day 4
Sunday, 07 August 2011 13:19
Castle Test, Day 4 in Harare: Bangladesh 287 and 112 for 3 (Tamim 43) need another 263 runs to beat Zimbabwe 370 and 291 for 5 dec (Taylor 105*, Taibu 59).The new Zimbabwe captain Brendan Taylor’s maiden Test century has paved the way for what will, barring most unusual circumstances, be an outstanding and highly creditable victory for the home side on the final day.